ग्यारेजमा थन्किए घुम्ती शौचालय | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मुख्य चोकहरूमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । यहाँका मुख्य चोकहरूमा सवारीसाधन र पैदलयात्रुको भीडभाड नै हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ५९ लाखमा खरिद गरेर ल्याएका चार घुम्ती शौचालय आजभोलि घुम्न छाडेर उपयोगविहीन भएका छन् ।
करिब तीन महिना चोक–चोकमा राखिएका घुम्ती शौचालयमा शौच गर्न ग्राहकहरू नै नआएको भन्दै ती शौचालय जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेको सवारी पार्किङमा थन्क्याइएको छ । खुला शौचको समस्या हटाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चारओटा घुम्ती शौचालय त्रिभुवनचोक, धम्बोझीचोक, विपीचोक, पुष्पलालचोकलगायत सार्वजनिक शौचालय नभएका अन्य स्थानमा राख्ने गरेको थियो ।
ठेकेदारमार्फत सञ्चालन गरिएका घुम्ती शौचालय प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क दिनुपथ्र्यो । तर, शौच गर्न आउने ग्राहकले पैसा तिर्न नमानेपछि ठेकेदार आफैँले शौचालय सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएनन् । सञ्चालन खर्च नै नउठ्ने देखिएपछि शौचालय थन्क्याइएका छन् । उपयोग हुने÷नहुने अवस्थाका बारेमा अध्ययन नै नगरेर खरिद गरिएका घुम्ती शौचालय उपयोगविहीन भएपछि स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
बाहिर तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई शौच गर्न समस्या भएपछि उपमहानगरपालिकाले घुम्ती शौचालय खरिद गरेको थियो । चोकमा मानिस शौच गर्न नपाएर पैदलयात्री शौचालय खोज्दै होटलमा पुग्ने गर्छन् । तर, कतिपय होटल सञ्चालकले शौच गर्न दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा घुम्ती शौचालय उपयोगविहीन बनाउनु राम्रो नभएको नेपालगञ्ज–१ धम्बोझीका मनिराम शर्माले बताए । उपमहानगरपालिका–१ कै पद्मा कार्कीले यहाँका चोकमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा कति ठूलो समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको बताए ।
सञ्चालनमा ल्याइएका शौचालयबाट संकलित मलमूत्रलाई प्रांगरिक मल बनाएर प्रयोग गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजनाबीचमै अलपत्र परेको छ । उपमहानगरले तीन महिनाका लागि शौचालय सञ्चालन गर्न ७० हजारमा सरसफाइकर्मी भानु भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सञ्चालन खर्चका लागि ग्राहकसँग पिसाब गरेबापत पाँच र दिसा गरेबापत १० शुल्क लिइँदै आए पनि ग्राहकले पैसा तिर्न नमान्दा शौचालय बन्द गर्नुपरेको भट्टले बताए ।
शौचालय नहुँदा नेपालगञ्ज आउने अधिकांश यात्रुले दिनहुँ सास्ती खेप्नुपरेको बर्दियाबाट नेपालगञ्ज आएका पदमसिंह थापाले बताए । सार्वजनिक शौचालय अभावमा सबैभन्दा धेरै महिलाले हैरानी व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भने उपयोगविहीन भएर शौचालय नथन्क्याएको दाबी गरे । ‘पैसा नतिर्ने समस्या देखिएकै हो । तर, त्यही कारणले थन्क्याउनुपरेको भने होइन’, प्याकुरेलले भने, ‘अब हामी अलि फरक तरिकाले त्यसको उपयोग गर्छाैँ ।’ सार्वजनिक कार्यक्रमका साथै नेपालगञ्ज भन्सार, बसपार्कजस्ता क्षेत्रमा घुम्ती शौचालय राख्ने तयारी छ ।
नेपालगञ्ज बजारमा अहिले पनि ११ सार्वजनिक शौचालय छन् । तीमध्ये चार मात्रै प्रयोगमा छन् । भएका सार्वजनिक शौचालयलाई राम्ररी प्रयोगमा ल्याउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले एकै पटकमा ६ जनाले शौच गर्न मिल्ने गरी घुम्ती शौचालय खरिद गरेर थालनी गरेको नयाँ काम पनि बीचमै अलपत्र परेको छ ।
काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेकपाको जिल्ला कमिटी एकता घोषणा आज गर्ने भएको छ ।
काठमाडौंका सडकमा इटालीयन ब्रुमर, कहाँ–कहाँ चल्छन् ब्रुमर ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि इटालियन ब्रुमरले सडक सफा गर्दै छ । राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ब्रुमर सञ्चालनमा…
राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता !
काठमाडौ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतले टिकापुर घटनामा संलग्न रेशम…
मनिषाको आत्मवृत्तान्त सार्वजनिक हुँदै : के–के खुल्दैछ सेक्रेट !
काठमाडौ । चर्चित बलिउड तथा नेपाली नायिका मनिषा कोईरालाको जीवन धेरै हदसम्म खुला किताव नै भईसकेको छ । उनको…
जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न डा. केसीको माग
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक एवम् चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न…
वैशाखमै पार्टी एकता हुने निश्चित
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले एमालेसँगको एकता वैशाख महिनामै हुने बताएका छन्।
चितवनको भरतपुरमा बुधबार…